Somtel oo markale dib u Biloowday Barnaamijka Saami-celinta Bulshada [DAAWO] | SAHAN ONLINE
Somtel oo markale dib u Biloowday Barnaamijka Saami-celinta Bulshada [DAAWO]
BOOSAASO:- Shirkadda Isgaarsiinta Soomaaliyeed ee Somtel ayaa amaanta magaaladda Boosaaso ku daah furtay, Marnaamijkii Saami-celinta bulshada, oo ah barnaamij ay bulshadu ku hesho Abaal marino kala gadisan.
Barnaamijka Saami celinta Bulshada ayaa isugu jiri doona, Abaal marinno maalinle ah, kuwo Asbuucle ah iyo kuwoo Labadi Asbuuc mar lagu guulaysanayo.
Madaxa Suuqgaynta ee shirkadda Somtel Maxamed Fu’aad oo shir Jaraa’di xarunta shirkadda ee Boosaaso, wuxuu sheegay in barnaamijkan uu macaamiisha Somtel u saamaxayo in maalin kasta ay kuu guulaystaan Hal Mobayl iyo Sidoo kale toddobaad kasta Hal Tablet
“Waxaa maalin kasta lagu Guulaysanayaa Hal Moobayl, waxaana ku guulaysanaya Mid ka mid ah macaamiisha Prepaidka ku shubta Kaarka Shirkadda Somtel. Waxaa Abuuskasta lagu Guulaysanayaa Hal TABLET, Waxaa asbuucaas ku guulaysan doona mid kamid ah macaamiisha Iibsatta adeega KAABE, oo ah adeeg aad kula hadlaysid Puntland oo dhan si bilaash ah, kuna helaysid 5G oo internet ah” Ayuu yiri Fu’aad.
Barnaamijkan Saami-celinta wuxuu kaloo suurtagalinaya macaamiish isticmaasha Adeega KAAFI in labadii toddobaad ay mar ku guulaysan karaan computer Laptob ah oo qaali ah.
Barnaamijkaan waxaa uu qayb ka yahay, barnaamijkii taxanaha ahaa ee shirkadda Somtel, ee ay bulshadu ku hesho abaal marino kala gadisan.